စစ်မှန်သည့်ခရစ်တော်နှင့် မှားယွင်းသည့် ခရစ်တော်တို့ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်း | နိုင်ငံတော်သက်ဆင်းကြွရောက်ခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်
99 ဗွီဒီယိုများ ကြည့်ရှုသူ ၁ ဦး နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်မွမ်းမံချက်:
Full New 2020 Myanmar Movie (ကလေးရေ၊ အိမ်ပြန်လာပါ) အပိုင်း (၃)
Full New 2020 Myanmar Movie (ကလေးရေ၊ အိမ်ပြန်လာပါ) အပိုင်း (၂)
Full New 2020 Myanmar Movie (ကလေးရေ၊ အိမ်ပြန်လာပါ) အပိုင်း (၁)
(အိပ်မက်မှ နိုးထလာခြင်း) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုမျာ - သန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ ဘယ်လူသားမှ ဘုရားသခင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်ဆီ ဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး
(အိပ်မက်မှ နိုးထလာခြင်း) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုမျာ - ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိသလား၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိသလား
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားများ- လှည့်ဖြားတတ်မှုကို ဖြေရှင်းပြီး ဘုရားသခင်ထံသို့ ဝမ်းမြောက်မှု ဆောင်ကျဉ်းသည့် ရိုးသားသည့်လူတစ်ဦးဖြစ်လာရန် နည်းလမ်း- အပိုင်း (၂) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားများ- ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် ရိုးသားစွာ ပြုမူပြီး ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ရရှိသည်- အပိုင်း (၁) Myanmar Christian Movie Clip (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ၂ - ဘုရားကျောင်း ပြိုလဲပြီးနောက်) အပိုင်း (၂) Myanmar Christian Movie Clip (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ၂ - ဘုရားကျောင်း ပြိုလဲပြီးနောက်) အပိုင်း (၁) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင် ကြွချီလာခြင်းကို ကြိုဆိုဖို့ အရေးကြီးဆုံးလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရမှာက ဘာလဲ (အပိုင်း၁/၅) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) သခင်ယေရှုပြန်လာမည့်ပရောဖက်ပြုချက်ဟာ ဘယ်လိုမျိုးမှန်လာမှာလဲ - အပိုင်း (၁) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) နောက်ဆုံးသောကာလမှ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းသည် လူသားအတွက် ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည် - အပိုင်း (၅) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) အပြစ်တွေကို လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းက တကယ်ပဲ ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားဖို့လက်မှတ်လား - အပိုင်း (၄) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ နှုတ်ကပတ်တော်တွေဟာ သမ္မာကျမ်းစာအပြင် မရှိတော့ဘူးလား - အပိုင်း (၃) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) သခင်ယေရှုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသေချာနိုင်မလဲ - အပိုင်း (၂) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဘာသာရေးစက်ဝိုင်းတို့၏ ရှုတ်ချပြစ်တင်ခြင်းလမ်းစဉ်ဟာ စစ်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်ပေလား။ အပိုင်း (၂) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းသည် မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ရသနည်း။ - အပိုင်း (၆) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ခြင်းဟာ သခင့်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ညီမျှလေသလား။ - အပိုင်း (၄) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) သခင့်အတွက် ဒုက္ခသုခခံ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ သခင့်အပေါ် ယုံကြည်မှု၏ လက်တွေ့ဘဝပေလား။ - အပိုင်း (၅) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်နှင့် ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့် ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် မည်သို့ထူးခြားစေသနည်း။ - အပိုင်း (၃) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) မင်းအာဏာစက်ရှိသူတို့အား လိုက်နာခြင်းဟာ ဘုရားသခင်ကို လိုက်နာခြင်းနှင့် အမှန်တကယ်ပဲ တူညီသလား။ - အပိုင်း (၁) (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သခင် ပြင်ဆင်ထားသော နေရာသည် အဘယ်တွင်နည်း (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ကောင်းကင်မှာလော မြေကြီးပေါ်မှာလော (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) သခင်ကြွလာသည့်အခါ မည်သူသည် ဦးစွာပထမ ချီဆောင်ခံရလိမ့်မည်နည်း (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သော နက်နဲမှုကို သင် နားလည်ပါသလော (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) ထို့ကြောင့် ဤသည်မှာ သခင် ပြန်ကြွလာပုံဖြစ်သည် Myanmar Movie (နားခိုရာအိမ် ဘယ်မှာလဲ) ဘုရားသခင်သာ လူသားမျိုးနွယ်ကို ကယ်တင်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို နာကျင်မှုမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်သည် အပိုင်း (၁) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင်က တံခါးလာခေါက်နေပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ရဲ့အသံတော်ကို သင် မှတ်မိနိုင်ပါသလား (၁) (အပိုင်း၄/၅) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင်က တံခါးလာခေါက်နေပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ရဲ့အသံတော်ကို သင် မှတ်မိနိုင်ပါသလား (၂) (အပိုင်း၅/၅) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင် ပြန်လည်ကြွရောက်ပြီးမိန့်ဆိုသည်ကို ကြားရတဲ့အတွက် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဟာ နိုးထလာကြပါပြီ။ (အပိုင်း၃/၅) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင် ကြွလာခြင်းကိုကြိုဆိုရာမှာ အလွယ်တကူအလုပ်တတ်ဆုံးအမှားတွေက ဘာတွေလဲ (အပိုင်း၂/၅) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း (အပိုင်း၁/၅) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲများသည် အဘယ်ကြောင့် အရှေ့အရပ်မှ လျှပ်ပြက်ခြင်းကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ကြသနည်း - အပိုင်း (၇) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) ဘာသာရေးဖာရိရှဲတို့၏ အနှစ်သာရကို မည်သို့ ချင့်ချိန်ရမည့် နည်းလမ်း - အပိုင်း (၁) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် အဘယ်ကြောင့် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် အသင်းတော်ကို ညဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြသနည် - အပိုင်း (၆) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) စာတန်၏ လွှမ်းမိုးမှုမှ လူကို ဘုရားသခင် ကယ်တင်ပုံ - အပိုင်း (၅) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ဘာသာရေးလောကအတွင်းတွင် သခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ပါသလား - အပိုင်း (၄) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသလား - အပိုင်း (၃) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ သမ္မာကျမ်းစာအပေါ် ရှင်းပြချက်များ၏ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင် - အပိုင်း (၂) (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) ဘုရားသခင်ဟာ အမှုတော်အတွက် လူ့ဇာတိခံယူဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ခြင်း - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၆ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) ခရစ်တော်ဟာ သမ္မာတရား၊ လမ်းခရီးနဲ့အသက်ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ - ဇာတ်လမ်းတို ၅ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) လူ့ဇာတိခံတဲ့ဘုရားသခင်ကသာ နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်တယ် - ဇာတ်လမ်းတို ၄ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) ဘုရားသခင် လူ့ဇာတိခံခြင်း၏ နက်နဲမှု - ဇာတ်လမ်းတို ၃ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) သခင်ဟာ ပြန်ပြီးကြွလာတဲ့အခါ၊ လူတွေကို အသိပေးဖော်ပြမှာလား - ဇာတ်လမ်းတို ၂ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) လူသားကြွရောက်လာခြင်း၏ နက်နဲမှု - ဇာတ်လမ်းတို ၁ ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - ခြေချင်းများကိုစွန့်ပစ်ပြီး သမ္မာတရားလမ်းကို လေ့လာပါ (အပိုင်း ၁/၄) ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - သမ္မာကျမ်းစာကို ကျော်လွန်သွားပါ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ စားပွဲကို သခင်နှင့်အတူတက်ရောက်ပါ (အပိုင်း ၃/၄) ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - ဘာသာရေးဖာရိရှဲတို့၏ ချည်နှောင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ပြီး ဘုရားသခင်ဆီသို့ ဦးလှည့်ပါ (အပိုင်း ၄/၄) ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - သမ္မာကျမ်းစာထဲက ရှိရှိသမျှဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲလား။ (အပိုင်း ၂/၄) ပြောင်းလဲခြင်းအခါသမယ - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆီ ဝင်ခွင့်ရမယ့် တစ်ခုတည်းသောလမ်း - (အပိုင်း ၂/၂) ပြောင်းလဲခြင်းအခါသမယ - ပညာရှိသောသတို့သမီးတွေဟာ ဘယ်လိုချီဆောင်ခြင်းခံရမှာလဲ - (အပိုင်း ၁/၂) စောင့်လို့နေ - အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲသော နှစ်ပေါင်း ၆ဝဝဝ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို ဖော်ထုတ်ပြခဲ့သည် - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၇ စောင့်လို့နေ - ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ခွဲခြားနိုင်မလဲ? (၂) - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၆ စောင့်လို့နေ - ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ခွဲခြားနိုင်မလဲ? (၁) - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၅ စောင့်လို့နေ - သခင် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ဆန့်ကျင်သူများ၏ အဆုံးသတ် - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၄ စောင့်လို့နေ - ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို ဆောင်သောသူသာလျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ကို၀င်ရမည်။ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၃ စောင့်လို့နေ - ပညာရှိ သတို့သမီးများဟာ မှန်ကန်တဲ့ ခရစ်တော်နဲ့ ခရစ်တော်အတုအယောင် တွေကို သေချာခွဲခြားနိုင်တယ်။ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၂ စောင့်လိုနေ - သခင် ဒုတိယအကြိမ်ပြန် ကြွလာတာကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို သတိနဲ့ စောင့် ကြည့်ခြင်း စောင့်နေခြင်း ပြုမလဲ။ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၁ အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း - သုံးပါးတစ်ဆူသင်းအုပ်ဆရာ၏ အယူအဆများအပေါ် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်၏ အံ့သြဖွယ်ချေပချက် (အပိုင်း ၅/၆) အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း - အုပ်ချုပ်နေသည့် အစိုးရအား နာခံခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား နာခံခြင်းနှင့် မတူညီပေ (အပိုင်း ၄/၆) Brighten Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုး (၁) ဘာသာရေးလောကသည် ဗာဗုလုန်မြို့တော်ကြီးအဖြစ် ဆုတ်ယုတ်လေပြီ Brighten Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို (၂) သူတော်ကြောင်ဖာရိရှဲတို့သည် အဘယ်ကြောင့် အမင်္ဂလာ ရှိကြသနည်း။ Brighten Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) ရုပ်ရွင္ဇာတ္လမ်းတို (၃) ဖာရိရှဲတို့ ဘုရားသခင်အပေါ်ဆန်ကျင်ခြင်း၏ အခြေအမြစ်မှာ အဘယ်နည်း။ Brighten Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) ရုပ်ရွင္ဇာတ္လမ်းတို (၄) သမ္မာကျမ်းစာကို ရှင်းလင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်အတွက် ဂုဏ်တင်ချီးမြှောက်ပြီး သက်သေခံခြင်းနှင့် တူညီပါသလား။ Clip5နောက်ဆုံးသောကာလတွင် တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကြား ဆက်နွယ်မှု (နာကြည်းဖွယ်ရာအမှတ်တရများ) ကယ်တင်ခြင်း ခံရခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ကြားရှိ ဆက်နွယ်ပုံသည် အတိအကျ မည်သို့ဖြစ်သနည်း။ - အပိုင်း (၄) (နာကြည်းဖွယ်ရာ အမှတ်တရများ) ဇာတ်လမ်းတို ၃ သင်သည် ရှင်ပေါလုကို အမှန်တကယ် နားလည်ပါသလား နာကြည်းဖွယ်ရာ အမှတ်တရများ - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်သနည်း။ (အပိုင်း2/5) (နာကြည်းဖွယ်ရာအမှတ်တရများ) ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်း ငြင်းခုံဆွေးနွေးခြင်း - အပိုင်း (၁) (ဧဝံဂေလိတရား သယ်ဆောင်လာသော တမန်) သခင်သည် ကားစင်အတင်ခံရသည့်အခါတွင် ကယ်တင်ခြင်းအမှု ပြီးဆုံးသွားပါသလား။ - အပိုင်း (၁) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို (၂) ခရစ်တော်သည် လူ့ဇာတိခံယူသည့် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို (၃) သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲတို့သည် သခင် ပြန်လည်ကြွလာခြင်းအပေါ် ပြုမူပုံ (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) ခရစ်တော်ရဲ့ပလ္လင်ရှေ့မှောက် တရားစီရင်ခြင်းကို တွေ့ကြုံရခြင်းရဲ့သက်သေခံချက်များ (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်နဲ့ လူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကြား ဘယ်လိုခွဲခြားကြမှာလဲ ၃ (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) ဘုရားသခင်ကသာ လူတွေကို အသက်တာပေးနိုင်ပါတယ် ဇာတ္လမ်းတို ၆ ဇာတ်လမ်းတို ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ သမ္မာတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကြား ကွဲပြားခြားနားမှု (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) ဘုရားသခင်ကသာ တရားစီရင်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်တယ် ၄ (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ ခရစ်တော်အတုအယောင်တွေကြား ဘယ်လိုခွဲခြားမှာလဲ (၂) (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ ခရစ်တော်အတုအယောင်တွေကြား ဘယ်လိုခွဲခြားမှာလဲ (၁) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟူသော ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းအိပ်မက် - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရရန် မည်သို့လျှောက်လှမ်းမည်နည်း(၂) (အပိုင်း2/5) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို (နောက်ဆုံးသောကာလ ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်းအမှုတော်နှင့်သခင်ယေရှု၏အမှုတော် မည်သို့ကွာခြားသနည်း) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟူသော ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းအိပ်မက် - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရရန် မည်သို့လျှောက်လှမ်းမည်နည်း(၁) (အပိုင်း1/5) Myanmar Christian Movie (ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် မည်သည့်အရပ်၌ - ကျိန်းသေတည်ရှိသနည်း) (ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟူသော ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းအိပ်မက်) ခရစ်တော်၏ပလ္လင်တော်ရှေ့၌ စီရင်ခြင်းအမှုတော်နှင့် ထာဝရအသက်ဆိုင်ရာ သက်သေခံဒေသနာများ Gospel Movie Clip "Song of Victory" (6) - The Path That Leads to Purification and Salvation Gospel Movie "Mission of Love" (3) - The Way to be Purified and Saved
ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (သင်မည်သူ့ကို သစ္စာစောင့်သိသနည်း)
ဘေးဒုက္ခများထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာမှုကို ရရှိသည့်နည်းလမ်း (နောဧနေ့များ ရောက်လာကြပြီ)
Myanmar Gospel Music Video 2020 - ဖာရိရှဲတို့ ယေရှုကို ဆန့်ကျင်ရခြင်းအကြောင်းရင်း
Myanmar Worship Music Video 2020 - ဘုရားသခင်၏ခြေရာတော်များအားမည်ကဲ့သို့ရှာရမည် နည်း
Myanmar Christian Song With Lyrics (လူသည် စာတန်၏ လွှမ်းမိုးမှုအား ဖယ်ရှားပစ် သည့်အခါ ကယ်တင်ခြင်းရရှိ၏)
Myanmar Christian Testimony Video (မုသားတို့ သုံးမိပြီးသည့်နောက်...)
Myanmar Movie - တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု မှတ်တမ်းများ (ကျရှုံးလုဆဲဆဲမှာ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း)